အပြုံးပုံ VKONTAKTE ၏စိတ်နှလုံးကူးယူဖို့ကိုဘယ်လို - VKONTAKTE - 2019
Google Play တွင်အသုံးဝင်သောအစီအစဉ်များ, ဂိမ်းများနှင့်အခြား application များအမျိုးမျိုးကြည့်ရှုဒေါင်းလုတ်လုပ်မယ့်နေရာလေးကိုက Android-ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဝယ်ယူရန်နှင့်စတိုးဆိုင် browsing အတွက်အခါ, Google အကောင့်ထဲသို့ဝယ်၏တည်နေရာကြာ, နှင့်ဒေတာနှင့်အညီတတ်နိုင်သမျှဝယ်ယူခြင်းနှင့် download ပြုလုပ်ထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦးသင့်လျော်သောစာရင်းဖြစ်ပေါ်လာသော။
Google Play တွင်တိုင်းပြည်ပြောင်းခြင်း
တိုင်းပြည်အတွင်းအချို့သောထုတ်ကုန် download ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါများအတွက်မကြာခဏက Android device ကိုပိုင်ရှင်တွေက Google Play အတွင်းရှိတည်နေရာကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျကို Google account တစ်ခုအတွက် setting များကိုပြောင်းလဲနေ, ဒါမှမဟုတ်အထူး applications များ အသုံးပြု. ဒီလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 1: IP ကိုပြောင်းပေးဖို့လျှောက်လွှာအသုံးပြုခြင်း
ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသူရဲ့ IP-လိပ်စာများကိုပြောင်းလဲ applications များဒေါင်းလုပ်ပါဝငျသညျ။ hola အခမဲ့ VPN ကို Proxy - ကျနော်တို့လူကြိုက်အများဆုံးကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်အားလုံးလိုအပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပါတယ်နှင့် Play ကိုစျေးကွက်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
hola အခမဲ့ VPN ကို Proxy ကို Google Play Store မှ Download
အပေါ်ကလင့်ခ်ကနေ app ကို Download ပြုလုပ်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ပွင့်လင်း။ အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်တွင်တိုင်းပြည်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနဲ့ main menu သို့သွားပါ။
အဆိုပါကမ္ပည်းနှင့်အတူမည်သည့်ရရှိနိုင်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပါ "အခမဲ့"ဥပမာ, အမေရိကန်။
ရှာတွေ့ « Google Play » အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်နှင့်ပေါ်မှာကလစ်လုပ်ပါ။
ကိုနှိပ်, VPN ကိုမှတဆင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုအတည်ပြုနိုင်ရန် pop-up window ထဲမှာ "အိုကေ".
အားလုံးအထက်ပါအရေးယူပြီးနောက်သင့်ရဲ့ cache ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဒေတာများကိုဖျက်ပစ်ရန် Play ကိုစျေးကွက် application setting ရှိလိုအပ်ပါသည်။ : ဒီလိုလုပ်ဖို့
settings ကိုသွားပြီး select လုပ်ပါ "Applications ကိုနှင့်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ".
သွားပါ "Applications ကို".
ရှာတွေ့ « Google က "Market က Play ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Reset" နှင့် "Clear ကို cache ကို" လျှောက်လွှာ၏ cache နဲ့ data တွေကိုရှင်းလင်းဖို့။
Google မှာ Going Play, သင်စတိုးဆိုင် VPN ကို-လျှောက်လွှာ, အသုံးပြုသူထိတွေ့သောတူညီတိုင်းပြည်ခဲ့ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အန်းဒရွိုက်-ကိရိယာများပေါ်တွင် VPN ကို-Connection ကို setup ကို
Method ကို 2: သင့်အကောင့်ဆက်တင်ကိုပြောင်း
အသုံးပြုသူမှာထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်တိုင်းပြည်ပြောင်းဖို့က settings ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်ဘဏ်ကဒ်သို့မဟုတ် Google account ကိုချိတ်ဆက်ရပါမည်။ သင်တစ်ဦးကဒ်နေထိုင်ရာလိပ်စာကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဒီကော်လံအတွက်ဖြစ်တဲ့အခါနောက်ပိုင်းမှာ Google Play စတိုးအပေါ်ပြသခဲ့သောတိုင်းပြည်ဝင်သင့်ပါတယ်။ : ဒီလိုလုပ်ဖို့
သွားပါ "ငွေပေးချေမှုရမည့်နည်းလမ်းများ" Google က pleya ။
မီနူးထဲမှာသင်အသုံးပြုသူများအတွက်တွဲကတ်စာရင်းတစ်ခုကိုမြင်ရအဖြစ်သစ်တွေထည့်နိုင်သည်။ အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အခြားငွေပေးချေမှုညှိနှိုင်းမှု"ရှိပြီးသားခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရန်။
သင့် browser များတွင်သစ်တစ်ခု tab ကိုဖွင့်ပါ, သင်အပေါ်ထိရန်လိုရှိရာ "ပြောင်းလဲခြင်း".
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "တည်နေရာ"အခြားမည်သည့်တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲလိုက်ပါနဲ့သူမရဲ့လိပ်စာအတွက်အစစ်အမှန်ဘဝရိုက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါ CVC-code ကို Enter နှိပ်ပါ "Update ကို".
အခုတော့ Google Play တွင်သုံးစွဲသူရှိသည်သောတိုင်းပြည်များ၏စတိုးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
Google Play စမှတိုင်းပြည်တစ်နေ့တာအတွင်းပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်သတိပြုပါ, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်နာရီအနည်းငယ်ကြာပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Google Play စတိုးမှာဖယ်ရှားခြင်းငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း
တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ option ကိုလည်းတိုင်းပြည်၏ Play Store မှာအပြောင်းအလဲကိုအပေါ်ကန့်သတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီပေးသည်ကြောင်း Market ကကူညီ application ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းယောက်ကိုလက်ခံရရှိရမည်ဟုစိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည်။
Read more: Android ပေါ်မှာအမြစ်အခွင့်အရေးရယူခြင်း
Store ကို Play ဂူဂဲလ်အတွက်တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းမပိုတဲ့တစ်ကြိမ်ထက်တစ်နှစ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သုံးစွဲသူသူတို့ရဲ့ဝယ်ယူမှုအကြောင်းကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အဖြစ်အနာဂတ်ဝယ်ယူမှုအောင်များအတွက်လိုအပ်သောအခြားဒေတာများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အသုံးပြုသူကိုကူညီတည်ဆဲ Third-party applications များအဖြစ်စံ setting များကို Google Account ကို။
https://termotools.com my.termotools.com © VKontakte 2019